Birao malefaka Luminescent & trano mpamokatra horonantsary - Shina Luminescent matevina birao & sarimihetsika mpamatsy & orinasa
Photoluminescent Vinyl Tape / Sarimihetsika
Ny sarimihetsika / kasety photoluminescent dia misy fiantraikany tsara amin'ny fitahirizana hazavana hita maso sy manelatrelatra hita maso. Aorian'ny fitrandrahana hazavana hita maso mandritra ny 10 ka hatramin'ny 30 minitra dia afaka mibanjina ao anaty haizina mandritra ny 10 ora farafaharatsiny. Ary afaka averimberina foana mandritra ny fotoana hitehirizana sy ny fiasana mamirapiratra. Ary izy ireo dia manana fampiasa tsara amin'ny fiaretana toetr'andro miaraka amin'ny tsy misy poizina sy tsy manimba ary tsy misy fiantraikany amin'ny radio. Ny sarimihetsika luminescent miaraka amin'ny adhesive-tena dia azo ampiasaina amin'ny famokarana fitaovana na lahatsoratra samihafa, izay ampiasaina dia mitovy amin'ny tabilaona mafy kokoa, mora kokoa kosa. Ny toy izany dia azo anaovana karazana endrika na famantarana ary apetrakao eo amin'ny toerana ilainao.
Mamirapiratra amin'ny horonantsary maizina
Photoluminescent PVC sarimihetsika adhesive mazava ao amin'ny sarimihetsika maizina, horonantsary fluorescent, Luminescent foil Ny sarimihetsika photoluminescent PVC dia vokatra luminescent vokarina amin'ny alàlan'ny pigolinesinescent pigment, sary mihetsika photoluminescent vita amin'ny plastika malefaka, miorina amin'ny taratasy adhesive, tsy mivaingana ary tsy mampidi-doza. Tsy misy singa manaisotra radioaktif izany ary alaina amin'ny fidiran'ny hazavana haingana. arrangedsuit ho an'ny pirinty sutra sy pirinty Ink-jet ...
Vetivety amin'ny takelaka mainty Vinyl
Ny volyl fantsom-piraofisaka ho an'ny tena dia manana vinyl manam-pahaizana mahery vaika ary manana toetra mampiavaka azy. Azo alaina ao anaty rolitra 1m x 50m na ​​hotapahana mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa. Eo amin'ny taratasy nofonosina sy nasiana tombo-kase anaty baoritra matanjaka ireo horonan-taratasy ho an'ny fitaterana sy fitahirizana azo antoka. Famaritana: Ny vinyl mahay mifono vy izay manana toetra marevaka "Intensity". C ...
Ny sarimihetsika photoluminescent dia vokatra luminescent miorina amin'ny alàlan'ny pigolety photoluminescent, Izy io dia sarimihetsika photoluminescent vita amin'ny plastika malefaka, izay natambatra tamin'ny taratasy adhesive, nontoxic ary tsy mampidi-doza. Tsy misy singa manaisotra radioaktif izany ary alaina amin'ny fidiran'ny hazavana haingana.
Birao matevina Photoluminescent PVC
Photoluminescent PVC fonosana matevina dia jiro mavitrika amin'ny vokatra maizina novokarina tamin'ny fototry ny piggine photoluminescent lava be dia be, tabilao matevina photoluminescent vita amin'ny takelaka vita amin'ny plastika mafy. Ity takelaka matevina PVC fotoluminescent ity dia vokarina amin'ny fampifangaroana vovoka fotoluminescent miaraka amina résin-tsolika marobe PVC.
Photoluminescent PVC matevina matevina
Ny taratasim-bola ara-teknika dia arakaraka ny fenitra mifanaraka amin'izany.
Fanontana fitifirana sy fanaovana pirinty vita amin'ny landy, valin'ny fangatahana milamina .Application amin'ny marika fiarovana 、 Famantarana fampitandremana signs famantarana miady amin'ny afo sy ny maro hafa.